I-log yokufaka: Faka iSlackware 14 ngaphandle kokufa emzameni. | Kusuka kuLinux
I-log yokufaka: Faka iSlackware 14 ngaphandle kokufa emzameni.
eliotime3000 | | Kunconyiwe, Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko
Sanibonani nonke. Futhi bengilokhu ngibambezela ukwenza lo mbhalo mayelana neSlackware 14, ake ngikutshele ukuthi ukusebenzisa ngokunenzuzo iqiniso lokuthi sengizophothula lesi semester sokugcina somsebenzi wami wobuchwepheshe kubuchwepheshe beComputing kanye neLwazi futhi balungisa kabusha igumbi lekhompyutha futhi, manje senginethuba loku yenza okokufundisa ngendlela ezolile futhi eningiliziwe.
Esihlokweni esandulele, Ngikhulume ngokuhlangenwe nakho enginakho neSlackware ngokuzithoba kangangoba ngathwalwa futhi angikucacisanga ngentshiseko.
Manje ngokuqhubeka nalolu chungechunge lwezihloko ezinikezelwe kule distro eyingqayizivele, ngizokwethula ukuthi ungayifaka kanjani iSlackware 14 ngeminye imininingwane okungenzeka ukuthi uyikhohliwe I-DMoZ (njengezinye iziphakamiso ezivela lapho kulungiswa izingxenye ezithile), kanye nencazelo yesikhathi esithile enezinyathelo ezithile, ikakhulukazi ngokufomatha.
I-athikili oyibukayo impendulo evela ku- Isifundo sokufaka i-Slackware eyenziwe nguzakwethu u-DMoZ, esimbonga ngenjabulo enkulu ngokusisiza ukuba sifunde kabanzi ngale distro
Isigaba 1: Ukukhethwa kwe-Kernel nokufometha kwangaphambili
Ngenkathi abaningi bezobona isikrini esinamagama asobala abangase bangasiqondi, kungenxa yokuthi iSlackware ayiqali i-kernel ngokuzenzakalela. Lokhu ngokuqinisekile kuzovela kuwe:
Esikrinini ichaza ukuthi kufanele sikhethe phakathi kwekhenela le-Pentium III engasasebenzi namakhompiyutha aphansi nge-console nje (ukuthayipha ama-huge.s), noma ama-PC "anamuhla" aqala nge-Pentium IV nabalandelayo (hugesmps.s).
Uma i-PC yethu ihlonipheke ngokwanele ukuthi isebenze, sibhala ama-hugesmp.s bese siyinika Faka ukuze sikwazi ukusebenzisa i-kernel esiyikhethayo.
Esikrinini esilandelayo, sizosikhombisa ukuthi iyiphi ikhibhodi esizoyisebenzisa:
Sibhala «1» ukuze sikwazi ukufaka izinketho ezitholakalayo esinazo. Kuzovela imenyu enjengale: +
Endabeni yami, ngakhetha ukwakheka kwekhibhodi yesiLatini, engikujwayele isikhathi eside. Sinikela Faka ekukhetheni kwethu, futhi saqala ukuhlola:
Ngokusobala usesimweni esihle kakhulu. Sinikela Faka, bese-ke, sibhala 1 bese siyinika Faka ukukwazi ukuqinisekisa ukukhetha kwethu ukusabalalisa; uma kungenjalo, sibhala «2», siyinikeza Faka futhi sikhetha ukuhlelwa kwekhibhodi esikufunayo.
Manje, iSlackware izosicela ukuthi singene ngemvume njenge-superuser (noma i-ROOT):
Simane sibhale "impande", siyinike yona Faka futhi ngokushesha kuzovela isikrini esizositshela uma sisebenzisa i-cfdisk noma i-fdisk ukufometha idiski yethu. Mina, ngabhala i-cfdisk ngakho-ke ngijwayele lolu hlelo lokusebenza.
Ngisebenzisa umthetho olula wabathathu, ngiqoke leli thimba elinezikhala ezingama-20 GB ukuthi u-90% bekuyiyunithi eyinhloko kuthi u-10% kube indawo eshintshanayo. Ukuze kucace bha, ukucushwa kungendlela elandelayo:
I-SDA1 / Primary / Linux (inketho 83) / 90% yesikhala sediski.
Ukushintshaniswa kwe-SDA5 / Logical / Linux (inketho 82) / 10% yesikhala sediski.
Ngale fomethi engiyinike yona, bekumi ngokulandelayo:
Sikhetha inketho ethi "bootable" bese siyikhetha engxenyeni enkulu noma eguqulayo, sikhetha "ukubhala" ukusetha kabusha ifomethi, siqinisekisa ngokuthayipha u- "yebo" futhi sihamba ngokukhetha inketho ethi "yeka".
Ngemuva kokwenza le nqubo yokusetha kuqala ifomethi, simane sibhale "ukusetha" ukuze sikwazi ukuqhubeka nesigaba esilandelayo sokufakwa.
Isigaba 2: Ukufometha kokugcina, ukukhetha izinto, iphasiwedi yezimpande, ukukhetha kwe-GUI nokukhethwa kwezibuko ze-repo yethu eyinhloko
Nansi iza ingxenye "elula" yokufakwa, echazwe kahle kakhulu ngemisebenzi. "Isilekeleli" sinje:
Sikhetha inketho ye- "ADDSWAP" ukuze sikwazi ukusebenza ngokufakwa ngokuthula. Siqinisekisa ukukhetha kwethu indawo yethu yokushintshanisa:
Manje, kuvela ibhokisi lisibuza ukuthi sifuna yini ukusebenzisa i-MKSWAP ukubheka ukuthi i-hard drive yethu inemikhakha emibi yini. Ake sicabange ukuthi i-hard drive yethu ilungile ngokuphelele bese sithi CHA:
Kuzovela ibhokisi lapho uqinisekisa khona ukuthi sesivele senze ukumisa kokukhetha kwethu kwe-SWAP. Sinikeza KULUNGILE:
Manje, kuzosicela ukuthi sikhethe ukwahlukanisa esikugcinele idatha yethu:
Sikhetha KHETHA, bese kuzovela izinketho ezintathu: Ifomethi (ifomethi), Hlola (buyekeza noma uhlole), noma Yeqa (ungenzi lutho). Sikhetha inketho yefomethi ukuze siyinike ifomethi ezosebenza nayo:
Ngokuvamile, uhlelo lwefayela le-EXT4 lunconywa ukuze kube lula. Sinikeza KULUNGILE ukuqinisekisa ukufometha kokugcina. Silinda imizuzwana embalwa kuze kuvele okulandelayo:
Lokho kusho ukuthi ukwahlukanisa kwethu sekuvele kufomethwe ngokuphelele. Sinikeza KULUNGILE.
Manje, iwizard izosinika ukuthi sikhethe uma sifuna ukufaka iSlackware kusuka kuCD / DVD, ngenethiwekhi, nezinye izinketho esinikeza zona:
Njengoba ngisebenzisa i-32-bit Slackware DVD, ngeke ngibe nenkinga yokukhetha amaphakheji. Siyinikeza KULUNGILE, futhi iyasibuza ukuthi sifuna ukufakwa "okuzenzakalelayo" (okuzenzakalelayo), noma ukufakwa kwe- "manual" (indlela enzima). Uma singafuni ukwenza impilo ibe nzima kakhulu, sikhetha "okuzenzakalelayo."
Ngemuva kokuthi uqede ukubuyekeza amaphakheji onawo, sizobona uhlu lwezinketho zokuthi sifuna ukufaka iSlackware ngokufana kakhulu nemenyu yezinketho uDebian anazo, ezihlukaniswa ngokususelwa kuzakhi zesistimu hhayi kuhlobo losizo olisebenzisayo. Sizonikeza.
Ngemicibisholo sihambisa ukukhetha okukhethwa kukho, ngomugqa wesikhala simaka futhi simake izinketho esifuna ukuthi sizifake futhi ngaleyo ndlela sigweme ukufaka u-8 noma u-10 GB wezinto esingafuni ukuzisebenzisa.
Ngemuva kokucabanga nokukhetha ukuthi iziphi izinketho ezibalulekile kithi, sichofoza KULUNGILE futhi kuzosikhombisa ngokushesha ukuthi sifuna inqubekelaphambili yokufaka ikhonjiswe kanjani:
Sinikeza inketho "egcwele" ukubona incazelo yephakeji ngayinye efakwe kuyo kuyo yonke inqubo.
Ngesikhathi senqubo yokufaka, sizobona ukuthi iSlackware ifaka iphakheji ngayinye ngokuya ngohlelo lwezinhlamvu zamagama, bese nathi sizobona incazelo eningiliziwe yephakeji ngalinye elifakiwe (lokhu kungathatha imizuzu engama-20 kuye kwezintathu ikota yehora, kuya ngomthamo ye-PC yethu, ngakho-ke ngiphakamisa ukuthi usebenzise leli thuba ngokusemandleni akho ukwenza eminye imisebenzi):
Ngemuva kokuthola ikhofi, noma isikhathi sokubulala, kuzosicela ukuthi senze ibhuthi ye-USB. Obvienlo ngokukhetha Yeqa inketho.
Manje, kuzosibuza ukuthi ngabe sizofaka i-LILO boot loader, efana ncamashi neGRUB. Uma kwenzeka une-distros eyodwa noma amaningi futhi usebenzisa i-GRUB, khetha inketho Yeqa. Kodwa-ke, uma ungenayo enye i-distro kuneSlackware noma awunaso isahlulelo seWindows, khetha inketho elula uma ungasafuni amanye ama-migraines (kuze kube manje, angizange ngimboze i-LILO ngokujula, ngakho-ke kokuthunyelwe okuzayo mayelana neSlackware ngizokuthumela "ucwaningo" lwami ngalo):
Esikrinini esilandelayo, iwizadi emnandi isibuza ukuthi yisiphi isisombululo esifuna iSlackware iqale ukusebenza ngokuzenzakalela.
Ngokuvamile, uma usebenzisa i-Intel Integrated Video, unenketho yokukhetha isixazululo esinconyelwe ukuqapha kwakho; uma kungenjalo, khetha inketho ejwayelekile:
Ngemuva kokukhetha isinqumo esifanele, sikhethe ukukhetha izinketho zamagundane. Sikhetha itheku le-PS / 2 uma sisebenzisa lelo chweba; Ukuze usebenzise iMouse enembobo ye-USB, khetha inketho nge-USB.
Ngemuva kokuqinisekisa ukuthi yiliphi ichweba esizosebenza ngalo igundane lethu, okulandelayo ngokulandelayo ukumisa inethiwekhi.
Sibhala igama lenethiwekhi, bese sikhetha i-DHCP, sishiya igama lomsingathi ngo ".", Futhi sikhetha izinsizakalo zenethiwekhi esizifunayo.
Esinye isikrini esizovela kuzoba ukukhetha ifonti yekhonsoli. Sithi cha uma singafuni, noma uma ifonti yesiginali ezenzakalelayo ibafaka, sikhetha yebo:
Ngemuva kokwenza lokhu, izosibuza ukuthi ngabe sifuna ukusebenzisa isikhathi se-BIOS se-PC yethu noma sisebenzisa ifomethi ye-UTC. Mina, ngakhetha inketho yokuqala, ngabe sengikhetha indawo yesikhathi engisebenzisa kuyo (i-America / Lima):
Manje, kufanele sikhethe imvelo yedeskithophu:
Njengoba ngithande i-KDE ngokukhethekile futhi ngenxa yokuthi isebenza kanjani kalula kule distro, ngiyikhethile. Manje, sizomisa iphasiwedi ye-ROOT:
Ngemuva kokunikeza iphasiwedi ku- Umsebenzisi omkhulu, izositshela ukuthi ukufakwa sekuvele kwenziwe ngendlela efanele.
Futhi njengoba sesibuyile kumenyu enkulu, siyinikeza ukuphuma, sibhala ukuqala kabusha kukhonsoli futhi iSlackware CD / DVD yethu izokhishwa (kimi, ngisebenzise iDVD).
Lapho uqala kabusha, imenyu ye-LILO izovela nenketho yeSlackware:
Ngemuva kokuthi sinikele Faka (ngenxa yokuphelelwa yisineke) noma vele uvumele ukuqala kwesistimu, kuzocela iphasiwedi ye-ROOT:
Ngemuva kwalokho, sizobe sibhala:
ku-console ukuze sikwazi ukwethula i-GUI yethu ekhethiwe ngeX.org (kulokhu, i-KDE):
Senza inhlanganisela yokhiye Alt + F2 ukubhala ebhokisini ukukhipha i- «konsole», okuyi-console esizosebenza kuyo i-repo yethu eyinhloko.
Yize i-slackpkg ichaza okuncane ngokuthi isebenza kanjani, iqiniso ukuthi lapho senza isenzo, kusitshela ukuthi asizange siyilungiselele i-repo. Ukwenza kanjalo, sibhala kukhonsoli:
Sizobona izibuko eziningana, engizikhethe ezimbalwa kernel.org nokunye okunjalo. Okufanele ukwenze ukungavumeli izibuko ozikhethele zona hhayi okunye:
Futhi ukuqeda lesi sifundo ngokuchuma, esizokwenza ukuthayipha ikhonsoli:
ngakho-ke senza kusebenze i-slackpkg yethu.
Yilokho okwanamuhla. Esiqeshini esilandelayo, ngizobe ngichaza indlela yokwenza iSlackware ikulungele ukuyisebenzisa, kanye nokunikeza impendulo yokuthi ungayisebenzisa kanjani iSlackbuilds nokuthi ungayifaka kanjani i-slapt-get, kanye nokuhumushela iSlackware olimini lwethu.
Ngaphambi kokuba ngihambe, kufanele ngibonge i-DMoZ ngezifundo ze-Slackware abazenzile, futhi bezilusizo kimi.
Kuze kufike okulandelayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Kunconyiwe » I-log yokufaka: Faka iSlackware 14 ngaphandle kokufa emzameni.
Amazwana ayi-61, shiya okwakho
Ngincamela ukuzidubula * - *.
Yebo, ngeSlackware akukufanele ukwenziwa. Nge-Gentoo noma i-Linux Kusuka ekuqaleni, yebo.
Ah, Sihlubuki !! I-LOL.
Ngisebenzise iGentoo, ngihlala ngifaka kusuka kusiteji3 futhi angikaze ngidubule, kuyiqiniso ukuthi kuyakhathaza kwesinye isikhathi, kepha ukulinda kuyakufanele, lapho ubona iPC yakho indiza ngokoqobo.
Uma endiza nge-gentoo, nge-Arch ngeke uze uyibone yenzeka ...
Yebo, iSlackware iyafana neGentoo ne-Arch, kepha okungenani ngeke ube wedwa emgwaqweni ngenxa yemibhalo ehambisana nayo.
Ngicabanga ukuthi kungenye indlela. Njengoba angikaze ngibone isivinini esengeziwe ku-Arch, uma uqala ukufaka izinto kufana nanoma iyiphi enye i-distro.
Ngicabanga okuphambene impela, futhi angikusho ngenxa yobunzima, kepha ngoba kuSlackware awunalutho, akukufanele ukukufaka okuningi, uma usufakiwe kuza nezinto eziningi ezifakwe ngokuzenzakalela, kepha uma ufuna ukufaka okuthile, okuwukuphela kwento esele ukuyihlanganisa, ngalokho ngibeka enye i-distro bese ngihlanganisa engikufunayo.
Ngithi, ngaphandle kwalapho kunenzuzo ethile eyeqayo kimi
U-Omar leon kusho
Ukushicilela kwakho okuhle kungenza ngibe nelukuluku lokuzama i-slackware… ..
Phendula u-Omar leon
Ungikhumbuza ukufaka i-archlinux ...
Kucishe kufane 😀
Ukufakwa kwe-Arch bekufana, baze basusa iwizadi. Manje, ifakwe cishe ngesandla ngemiyalo eyenziwe lula.
Yebo, kungikhumbuza isifaki se-Android x86
Yebo, i-Android ibukeka njenge-WinXP exutshwe nanoma yikuphi ukufakwa kwe-CLI.
Akukho okuningi okushintshile ngokufakwa kwayo ... Umnikelo omuhle
Umhlahlandlela omuhle, i-slackware yangempela ayinzima njengoba kubonakala, konke kuchazwa igxathu negxathu (futhi uma kungenjalo kumadokhumenti asemthethweni bakucacisa kabanzi).
Ngingangeza ukuthi ngaphambi kokuqala iseshini yokuqhafaza kusuka ezimpandeni, dala umsebenzisi wamanje ngomyalo we-adduser, phuma esimisweni sezimpande, qala ngomsebenzisi omusha bese u- "startx".
Kokuthunyelwe okulandelayo okulandelayo, ngizokwenza lokho futhi ngengeze izinto ezinjengokushintshwa kolimi, ukufakwa kwe-sbopkg ne-slapt-get.
Lokhu kube ukuhlanekezela kokuqala abanginikeze ukukufaka .. uu bekungelula kimi, hahaha bekungu-9 uma ngikhumbula kahle noma u-8, angazi ukuthi ukufakwa bekufana okufanayo kusukela lapho, akukashintshi nakancane.
Ngifisa kanjani ukuthi i-Arch ibe kanjena, nesifaki esisaqhubeka ngokufana eminyakeni edlule.
Sawubona compa, bengifaka umsebenzisi, futhi angizange ngingeze kunoma yiliphi iqembu (wheel, floppy, audio, video, cdrom, plugdev, power, netdev, lp, scanner), ungachaza ukuthi ungayilungiselela kanjani?
Umsebenzi omuhle, ngiyabonga ngokwabelana 😀
Kuze kube muva nje kumakhompyutha ami ama-2 (i-laptop kanye nedeskithophu) bengine-Slackware -current kuphela, kepha ukuzama amanye ama-flavour ngafaka i-Arch (okokuqala) kwi-laptop ne-Fedora kudeskithophu yami.
Bengihlela ukushintsha i-distro yedeskithophu yami, izinketho zami engingakhetha kuzo, ngibuyele ku, Debian noma Slackware, ngicabanga ukuthi ngizofaka kabusha iSlackware 🙂
Lokhu kuzongisiza kakhulu ngoba ngicabanga ukufaka iSlackware kwi-netbook yami (okuwukuphela komshini wami). Ngokweqiniso angikuboni kunzima ukufakwa, noma ngabe ukube bengikuthandile ukukhombisa ukuthi ukufakwa kanjani "kwamadoda", okungukuthi, imodi eyinkimbinkimbi (yochwepheshe) haha.
Noma kunjalo, umnikelo omuhle futhi ngibheke phambili eminye iminikelo mayelana neSlackware
Ngalobo bunzima obukhulumayo, kukhona iGentoo kanye / noma iLinux Kusuka ekuqaleni. USlackware wayeyi-distro yokuqala okwenzeka kuye ukuthi abeke lowo msizi ukuze agweme ukwenza inkinga ngempilo yakhe neSLS.
Cha, cha, angibhekiseli kulobobunzima kepha bengizothanda kakhulu ukube izinketho ze- "manual" noma "expert" ezinikezwe yi-Slackware wizard bezisetshenzisiwe ngoba iqiniso liyangidonsa, kepha lokho kuyinto Ngizozibona uma ngiyifaka
Ah kuhle. Ngokwami, kuzodingeka ngibe nesikhathi esithe xaxa noma ngiqede isemester yeziqu zami ukuze ngibe nesikhathi esithe xaxa sokubona izinketho eziphambili ezinazo.
Kuhle kakhulu, kuhle kakhulu, njengamanje ngenza iWall, ye-openSUSE ne-Slackware.
Ngifuna ukwandisa inani labasebenzisi kulowo nalowo, yini engcono, okwenza ama-distros abe ngothando 😀
UJesu U-Israyeli Perales Martinez kusho
Ngine-iso kwi-pc yami izinsuku / amasonto / izinyanga ezimbalwa, futhi ne-debian kodwa okwamanje angikwazi ukukhipha i-fedora (izisekelo ngoba ngizizwa ngikhululekile lapha) kepha ngizoyifaka kumshini obonakalayo futhi kubonakala kimi i-distro enhle kakhulu, okungenani ukufakwa kuyashesha futhi kunamathela ekuqabuleni
Phendula uJesu Israel Perales Martinez
Yebo, iSlackware iyindawo elula kakhulu ye-KISS engiyisebenzisile kuze kube manje.
Ekugcineni nginezaba… ahem… isizathu sokuzama islaki 😀 ngiyabonga !!!!!
Kokuthunyelwe okulandelayo, ngizobe ngandisa isaga ngokulungiselela okungeziwe, kanye nokwenza olunye uchungechunge lwezikhala mayelana ne-Arch (noma iParabola GNU / Linux-Libre) + MATE + Iceweasel
Yebo, kimi njengoDebian ezinguqulweni zakamuva ayikho, ngiyifaka kulokho iqhude elikhala khona.
Ngicabanga ukuthi iyi-distro efanelekile, kepha futhi ngicabanga ukuthi udinga isikhathi esiningi esikhululekile ukuyenza i-100 ... Ngokuzayo ngizokufaka * Ö *
Siyabonga ngokushiwo u-Eliot,
Idatha eyengeziwe engalethwa ngeSlack iyaziswa njalo, ngilangazelela amanothi akho ku-slapt-get, ngokungangabazeki azosiza abaningana ukwenza leap kule distro engiyithandile kusukela umzuzu wokuqala.
Kancane kancane ngiphinde ngilethe amanothi angeziwe ...
Wamukelekile, i-DMoZ. Ngaphezu kwalokho, ngithathe inkathazo yokufunda amafayili osizo ngokucophelela ukuze ngicacise izici ezithile zokufakwa kweSlackware (njengokukhetha i-kernel nokubheka ubuqotho be-hard disk, okuthi uma bengingayifundanga, khona-ke bekungangithatha isikhathi eside kunalokho obekufanele).
Futhi, ngangikhohliwe ukuthi ngangizophinde ngichaze nge-slacky.eu repo, enekhathalogi ebanzi yama-binaries elungele ukufakwa futhi akudingeki ukuthi ihlanganise izinhlelo njengoba kwenzeka nge-slackbuilds.
Akukona ukuthi iSlackware iyinkimbinkimbi, ukuthi imininingwane eminingi iyadingeka ngolimi lwethu, kepha ngenxa ye-desdelinux, konke okuguqukayo =) ...
Siyabonga ngokusekela imbangela ...
Halala !!! ...
Wamukelekile, compa. Ngenza konke okusemandleni ami ukuqinisekisa ukuthi iSlackware isetshenziswa kabanzi njengeSlackware futhi okungenani iyaziswa kanjalo futhi ngaphandle kokubandlululwa.
Nalu uhlu lwama-repos eSlackware (afaka ama-slackbuilds) >> http://www.slackabduction.com/sse/repolist.php
Kubabazekayo, kufake emibhalweni yakho elandelayo ...
Ozithobayo (umzamo wokuqala wokuphawula esizeni)
Izikhathi engifake ngazo iSlackware (ezengeziwe zokuhlola) amafolda womsebenzisi (umculo, okulandwayo nokunye) azenziwanga ngize ngiqale iseshini yokuqhafaza ku-xfce, ngenkathi ngiyenza kuqala nge-kde ifolda yami ihlala ingenalutho. Angazi noma ivula noma iyiphi indlela yokukhiqiza ku-kde noma yehluleka lokho nge-terminal
Into efanayo efanayo yenzekile kimi, angikwazanga ukuthola imininingwane ngayo, yebo, i-Xfce ishesha kakhulu futhi isebenza ngokuphelele, iqiniso liyi-distro enhle kakhulu, futhi abasebenzisi abaningi ngokwengeziwe bathatha isikhathi ukuyivivinya, ngingomunye walabo abacabanga ukuthi phezulu kukhona i-Debian, i-Gentoo, i-Slackware ne-Arch, bese kuthi ezinye, ezingalindelekile (ezinye azikho) ukuze abasebenzisi be-novice baphendukele ku-GNU / linux, bafunde, futhi futhi uma ufuna, ukwazi ukuqhubekela phambili lawo ma-distros ayinganekwane.
I-Off-Topic: Ekushicilelweni kwalesi sihloko, ngingeze ne-Slackware mascot kepha kokuqukethwe kwendatshana, kepha bayisusa noma kunjalo. Siyini isizathu salokhu? Futhi ngubani ophethe ukuhlela izindatshana?
Bengilokhu ngifuna ukuzama le distro lapho uqeda i-athikili yokuthi ungayilungisa kanjani.
Ngibonga kakhulu ngale ndatshana, bengifunde enye intro futhi bengilinde izahluko ezilandelayo ezifanayo, ikakhulukazi lezo ezizofika (kunzima kimi ukuthola imininingwane mayelana nokumiswa / ukufakwa ngeSpanishi).
Ngokwako, kuncane kakhulu intshisekelo yokufunda ukuthi ungayisebenzisa kanjani le distro ngeSpanish. Okwamanje, ngikushiya isithombe-skrini engafaka kuso i-screenfetch futhi bengiphawula ngivela kuFirefox 15 >> https://blog.desdelinux.net/wp-content/uploads/2013/08/snapshot1.png?73b396
Le bhulogi ikhuluma ngokuxega
U-Eduardo Diaz kusho
Okuhamba phambili kakhulu. !!
Phendula u-Eduardo Diaz
Bangilinge. I-PC elandelayo enginayo, ngiyazama.
Umama wami! Sengimdala kakhulu ukuthi ngingaba nalezi zinto Eminyakeni eminingana edlule ngazama ukuyifaka futhi angikaze ngikwazi ukuqala uhlelo lwehluzo.
Ngibe nenkinga yokucinga i-linuxquestions.com ngemibuzo yami eminingi ebenginayo nge-slackware, ngoba imininingwane ngeSpanishi ayiyinhle neze.
I-Debian ne-Slackware zibhekwa njengenganekwane ngeminyaka yabo yokuphila.
Inkinga kuphela ebenginayo ngale distro enhle kwaba ukufakwa kwePulse Audio, yize ngayixazulula, ngangingaqiniseki ngokusebenza kwayo, ukusebenza, ingasaphathwa, kuhle kakhulu.
Ukukhuluma iqiniso, kuyisicefe kwezinye izimo, kepha ngihlela ukulisebenzisa ngoba yi-KISS distro elula kunazo zonke engiyisebenzisile kuze kube manje.
Umnikelo omuhle kakhulu @ eliotime3000, ngiyethemba ukubona okulandelayo.
Umnikelo omuhle kakhulu… Ngizolindela umnikelo olandelayo.
Bengilokhu ngisebenzisa iSlackware iminyaka, ngokwami ​​ngicabanga ukuthi ingenye yama-distros alula kakhulu ukuwafaka, futhi njengoba besho lapha, igcine indlela yayo yokufaka icishe ihlangane kwasekuqaleni.
Ngiyisebenzisa ngisho nakumaseva, njengoba iyi-distro ezinze kakhulu.
Ukuthunyelwe okuhle kakhulu!
U-Bjorn Menten kusho
Sawubona! Ngilandele imiyalo eya kuleyo ncwadi, kepha ngazithola sengifanele ngakha induku ye-USB boot ukuqala iSlackware. Ngifunde yonke into ngeLILO ngoba ekuqhubekeni kwayo yangikhombisa iphutha ngayo. Kuze kube manje angikaze ngiyithole ukuze iqalise ngaphandle kwememori, ngabe kukhona umuntu onenkinga efanayo? Ozithobayo.
Phendula ku-Bjorn Menten
Ngicabanga ukuthi ngo-2013 akusekho ukusatshalaliswa okunzima ukufaka, kufanele ufune imibhalo bese uyifunda ngokucophelela.
Okuthile njalo akudingeki kungisebenzele ...
Ekugcineni ngigijima i-startx futhi iyangitshela: umyalo awutholakalanga
kungaba yini ??????
URoberto Mejia kusho
Ngincamela ukuyizama nge-gentoo ukubona ukuthi iphuma kanjani i-xD yize ngingakaze ngidlule ku-stage3
Phendula uRoberto Mejia
KusukaLinux: Izingxoxo ngemizuzu engu-10
I-SDDM: Umphathi weSession engasindi futhi omuhle [Ukufaka ku-ArchLinux]